HomeWararka MaantaWenger: FA Cup ayaa Halis Ku Ah Tartanka Champions League
14/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa sheegay in kooxdiisu ay aad ugu dedaashay ciyaaraha FA Cup taasina ay dhaawacday fursaddoodii Champions League.
Kooxda Gunners ayaa soo gebogebaysay sagaal sannadood oo abaar koob la’aan ah, markii ay sannadkii hore ciyaartii kama dambaysta ahayd ee FA Cup ay garoo nka Wembley ku kulmeen Hull City, taas oo ay Arsenal koobka u damaashaadday.
Arsenal ayaa waxa ay Axadda toddobaadkan la ciyaaraysaa Middlesbrough ciyaar ka tirsan FA Cup oo maraya marxaladda rubuc-dhamaadka (quarter-final), waxaana taas walaac ka muujiyey Wenger oo tibaaxay in dedaalka kooxdiisu ugu jirto in ay ku guuleysato koobabka laga ciyaaro Ingiriiska ay caqabad ku noqotay fursaddii kooxdiisu ugu tartami lahayd Champions League.
“Muhiigum ayay noo tahay mar kasta in aanu si adag u ciyaarno. Mar walba ma guuleysan karno laakiin shan jeer ayaan ku guuleystay FA intii aan halkan joogay. Ma jiro qof intaa in ka badan ku guuleystay 18kii sannadood ee u dambeeyey, markaa si adag ayaanu u ciyaarnaa. Mararka qaarkood sida adag ee aanu u ciyaarayno (FA Cup), ayaa dhibaato nagu keenta Champions League.” Sidaa waxa yidhi Wenger oo xusay in koobka FA Cup uu ku guuleystay shan jeer.
Tababare Arsene Wenger waxa uu cabasho ka muujiyey ciyaaraha FA cup oo uu xusay in ay mar kasta ku beegmaan ka hor ciyaaraha Champions League.
“Marar badan ciyaaraha FA Cup waxay noqdaan ka hor ciyaaraha Champions League tusaale ahaan toddobaadkan waxa aanu ciyaaraynaa FA kadibna Champions League. Marar badan ciyaartooyo ayaa naga dhaawacma.
“Waxa aan xusuustaa ciyaartii aanu la yeelanay Manchester United, kadib waxa aanu la ciyaarnay Chelsea Champions League saddex maalmood ka bacdi, waxa nagaga dhaawacmay dhawr ciyaartoy waayo waxa aanu u ciyaarnay si adag.” Ayuu raaciyey.
Arsenal waxa ay u halgamaysaa in ay ka mid noqoto saddexda kooxood ee ugu tsarreeya Premier League, waxaana uu Wenger qiray in hamiga kooxdiisa ee sannadkan uu yahay in ay ka mid noqdaan afarta kooxood ee ugu sarreeya Premier League, laakiin hal dhibic oo kaliya ayay hadda ka hooseeyaan kooxda kaalinta afraad fadhida ee Southampton.
“Mahimigayagu waa in aanu ka mid noqono afarta kooxood ee ugu sarreeya, koobna aanu ku guuleysano markaa kadib.
“waxa aanu dooneynaa in aanu markasta ka qayb galno tartanka Champions League, sanndkanna sidaas oo kale waanay adag tahay marka aad eegto jadwalka kooxaha. Imika ciyaar walba koob ayaad moodaa” ayuu raaciyey Wenger.
Ronaldo: “Xulka France Wuu Fiican Yahay Laakiin Waanu Isku Kalsoonahay”
Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder – Full Game Highlights
George Groves vs Jamie Cox – Watch Full Fight Replay